Fitantanan’ny miaramila nanongam-panjakana: hozaraina ny seza, 18 volana ny Tetezamita any Mali - ewa.mg
Fitantanan’ny miaramila nanongam-panjakana: hozaraina ny seza, 18 volana ny Tetezamita any Mali
News - Fitantanan’ny miaramila nanongam-panjakana: hozaraina ny seza, 18 volana ny Tetezamita any Mali
Voarafitra ary nankatoavin’ny hery
velona any Mali ny sata hitondrana ny Tetezamita. Haharitra 18
volana izany, araka ny tapaky ny fihaonambem-pirenena natao tao
Bamako, ny herinandro teo. Nahitana ny miaramila, ny vovonan’ny
mpanohitra, ny fiarahamonim-pirenena, ny antoko politika, ny mpanao
gazety izany… Nifanarahan’ny rehetra fa hapetraka ny rafitry ny
fitondrana Tetezamita ka ahitana filoham-panjakana vonjimaika
sivily na miaramila, miaraka amin’ny filoha lefitra iray. Hisy koa
ny governamanta hotarihin’ny praiminisitra ahitana mpikambana miisa
25. Eo koa ny filankevi-pirenena ho an’ny Tetezamita, hizarana seza
miisa 121 ho an’ireo mpitandro filaminana, ny antoko politika, ny
mpitondra fivavahana, ny zanak’i Mali any ivelany “diaspora”, ny
vehivavy sy ny tanora.
Anisan’ny misongadina amin’ny
And-19 amin’izany sata izany ny tsy hanenjehana na hisamborana ireo
miaramila nanongam-panjakana ireo.
Ho laharam-pahamehana ny fitoniana
sy ny filaminana. Ny fanorenana ifotony ny fanabeazana sy ny
fanaovana politika. Eo koa ny fanovana ny lalàmpanorenana.
L’article Fitantanan’ny miaramila nanongam-panjakana: hozaraina ny seza, 18 volana ny Tetezamita any Mali a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 14/09/2020
”Raharaha karandohan’olona” – Morarano: hiditra an-tsehatra hanao fanadihadiana ny ”Justice et Paix”
Nambaran’ny lehiben’ny tonia mpampano lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina, Rajaonah Thierry, fa olona miisa 10 ny efa nanaovana famotorana ka hatolotra ny fampanoavana. Hiditra an-tsehatra amin’ity raharaha ity ny eo anivon’ny Ekar amin’ny alalan’ny “Justice et paix” hikaroka ny marina ka hanao fanadihadiana momba ny fisian’ny resaka maloto sy ambadika kolikoly hanafenana ny marina. “Tsiahy ny raharaha tao Ambolomadinika na 4 chemins Morarano, ny 10 aogositra lasa teo, tamin’ny nilazan-dRavaonirina Elisabeth fa nahita karandohan’olona tao amin’ny efitrano tamin’ilay tokantrano nitadiavany asa ny tenany. Raha ny filazany, nitady asa izy ka nahita soratra momba izany ary niditra sy noraisin’ny ramatoa iray. Raikitra fa hikarama 200 000 Ar izy. Nirahin’ilay mpampiasa azy handro ao amin’ny efitrano fandroana ka teo indrindra no nilazany fa nahitany karandoha. Nisy ny fahatairana ka nitsoaka nivoaka ny trano sy ny vavahady izy ary nanomboka teo ny fisian’ny fikorontanana teo amin’ny fiarahamonina sy ny mpitandro filaminana. Nandritra ny fisavana ilay tokantrano anefa, tsy nahitana na inona na inona tao an-tranon’ilay fianakaviana”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny tonia mpampano lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina, Rajaonah Thierry, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly. Raha ho an’ity mpahay lalàna ity, tsy mitombina ny filazan’ilay tovovavy momba ny fahitany karandohan’olona tao amin’ilay tokantrano ka lasa nivadika ho fanakorontanana ny raharaha ary azon’ny lalàna enjehina amin’izany Ravaonirina Elisabeth, araka ny nambarany. Nilaza izy fa tsy olom-bitsy ny monina amin’io tanàna io, nahoana no tsy nahita izany karandohan’olona izany hatramin’izay. Na izany aza, nahavariana ity mpahay lalàna ity fa nilaza ny mpiambina nandritra ny famotorana azy fa tsy nahita ny fidiran’ity tovovavy ity tao amin’ity tokantrano ity. Io mpiambina io anefa, araka ny fanazavan’ilay tovovavy, isan’ny nampandositra azy ary nilaza hoe “mandehana mandositra haingana sao maty eo ianao”. Mbola nanizingizina ihany koa izy fa io mpiambina io no nanokatra ny vavahady nidirany sy nivoahany.Sajo sy J.CL’article ”Raharaha karandohan’olona” – Morarano: hiditra an-tsehatra hanao fanadihadiana ny ”Justice et Paix” a été récupéré chez Newsmada.
Minisiteran’ny Raharaham-bahiny: « Voafetra ireo afaka mampiasa pasipaoro diplaomatika»
Namoaka fampahafantarana ny eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny momba ny fahazoana mampiasa pasipaoro diplaomatika. ” Voafehin’ny lalàna apetraky ny rafitra mpanatanteraka ny fahazoana mampiasa ny pasipaoro diplaomatika sy ny pasipaoro hanaovana servisy“, hoy ny minisitera. Notsiahiviny ny didim-panjakana mamaritra ny fomba fahazoana ny pasipaoro diplaomatika sy ny fampiasana azy, ary ny lisitr’ ireo olona afaka mampiasa izany, na mandritra ny fotoana maharitra izany, na mandritra ny fotoana voafetra.Natokana ho an’ny olom-panjakana ambony“Natokana ho an’ireo olom-panjakana ambony eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara, voatanisa mazava ao anatin’ity didim-panjakana manan-kery ity, sy ireo tompon’andraikitra amin’ny asa ara-diplaomatika sy ao amin’ny kaonsily eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara, mandritra ny asa ataon’izy ireo any ivelany hisoloany tena ny governemanta Malagasy ny pasipaoro diplaomatika “, hoy ihany n y minisitera. Navoitran’ny fampahafantarana fa ireto ny lisitr’ireo olona afaka mampiasa izany pasipaoro diplaomatika izany mandritra ny fampiharana ny asany. Ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Ny praiminisitra sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Ny filohan’ny Antenimierandoholona, ny filohan’ny Antenimieram-pirenena sy ny filohan’ny HCC. Ireo Solombavambahoaka sy ireo loholona. Ireo mpitsara momba ny lalàmpanorenana. Ireo masoivoho sy ireo mpiandraiki-draharaha ary ireo kaonsily jeneraly. Manampy izany ireo kaonsily « Honoraires ». Ireo manampahefana sivily na miaramila, ireo mpiasa manana ny sokajy A5 ao amin’ny departemanta foiben’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny, ireo olona mitana ny laharan’ny lehiben’ny fizaran’ny sampan-draharaha no ho miakatra, na koa ireo tompon’andraikitra mifandray amin’ireo solontena ivelan’i Madagasikara.Ireo mpitondra teo aloha… Ankoatr’izany, afaka mampiasa mandritra ny fotoana maharitra ny pasipaoro diplaomatika koa ireo mpitondra teo aloha rehetra. Anisan’izany ny filoham-pirenena teo aloha sy ireo praiministra nifandimby, ny filohan’ny Anenimierandoholona sy filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha. Tahaka izany koa reo filohan’ny HCC teo aloha . Ireo minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha; ary koa ireo mpikambana ao amin’ny « Corps des agents diplomatiques et consulaires ». Anisan’izany ireo mpiandriakitra momba ny raharaham-bahiny ao amin’ny servisy nasionaly na iraisam-pirenena, na mbola am-perinasa izy, na efa misotro ronono. Afaka mampiasa ny pasipaoro diplaomatika mandritra ny fotoana maharitra na voafetra ihany koa, ny vadin’ireo olona rehetra voatonona ao amin’ny andalana sasany eo ambony, hatramin’ny tsy mbola ampy taona na latsaky ny 21 taona tsy mbola manambady. « Ampahatsiahivina etoana fa fehezin’ny lalànan’ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fenitra diplaomatika azo ampiharina amin’ny fanjakana rehetra ny fampiasana ny pasipaoro diplaomatika. Anisan’izany ny Fifanarahana natao tany Vienne momba ny fifandraisana ara-diplaomatika tamin’ny 1961 », hoy ihany ny minisitera.Synèse R. L’article Minisiteran’ny Raharaham-bahiny: « Voafetra ireo afaka mampiasa pasipaoro diplaomatika» a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – “Major league soccer”: tafita amin’ny ampahefa-dalana ny ekipan’i Metanire
Tafakatra amin’ny dingana ampahefa-dalana hiadiana ny fifaninanam-pirenena amerikanina « Major league soccer » (MLS), taranja baolina kitra, ny Minnesota United Football, misy ilay vodilaharana malagasy, i Romain Metanire. Resiny teo amin’ny fiihodinana faharoa ny Columbus Crew, tamin’ny alalan’ny «tirs au but», 5 no ho 3, rehefa nisaraka ady sahala 1 sy 1 tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja ESPN Wide world of sports complex. Niady ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Nanantombo teo amin’ny fanafihana sy ny fitazomam-baolina ry zareo Columbus, mpampiantrano. Marihina fa tao anatin’ireo 11 nijoro voalohany i Metanire, saingy tsy nilalao hatramin’ny farany izy fa nosoloin’i Marion Hairston, teo amin’ny minitra faha-72, noho ny ratra nahazo azy.Nitarika anisa ny Minnesota UnitedNampiditra ny baolina voalohany ny Minnesota United, tamin’ny alalan’i Robin Lod, teo amin’ny minitra faha-18. Tsy nisy intsony ny baolina maty taorian’izay fa io isa 1 no ho 0 io ny nentin’ny roa tonta niala sasatra. Niezaka nanindry avy eo ny Columbus. Nanasahala ny isa izy ireo, tany amin’ny minitra faha-79, rehefa nahazo “penalty” nodakan’i Zardes.Nahafaty ny baolina nodakany avokoa ireo dimy lahy ho an’ny Minnesota United, raha efatra ihany ny an’ny Columbus, teo amin’ny «tirs au but». Hidona amin’ny SJ Earthquakes, izay nandresy ny Real Salt Lake, tamin’ny isa 5 no ho 2, ny Minnesota United, eo amin’ny ampahefa-dalana. Lalao hotontosaina ny alahady ho avy izao.TompondakaL’article Kitra – “Major league soccer”: tafita amin’ny ampahefa-dalana ny ekipan’i Metanire a été récupéré chez Newsmada.
Adin’ny samy mpitandro filaminana :: Zandary nifampitifitra teny an-dalambe
Nifanjevo ny zandary roa lahy, samy mpiana-draharaha ao amin’ny Hery vonjy taitran’ny Zandarimaria (FIGN), teny amin’ny sakana ara-pahasalamana Ambohimangakely, afak’ omaly alina tokony ho tamin’ny 8 ora. Tsy fantatra ny antony nampifanolana azy ireo fa ny tifitra niantefa tany amin’ilay zandary faharoa no nanaitra ny rehetra teo amin’ny manodidina, tamin’io alina io. Voalaza fa mbola notifirin’ iry voalohany tamin’ny basiny, kalachnikov, ihany koa ny lehibeny nitarika azy ireo teny an-toerana. Olon-tsotra iray hafa no anisan’ny naratran’ny bala tamin’izany fifanjevoana izany. Voatendry hanampy an’ireo mpitandro filaminana namany teny amin’ny sakana ara-pahasalamana, teny Ambohimangakely, ireo zandary ireo. Nidina nijery ny zava-nisy teny an-toerana ny lehiben’ny FIGN, jeneraly Nixor Tsitambala. Nosamborina ilay zandary mpianadraharaha nahavanon-doza. Niatrika famotorona nanomboka omaly izy, hoy ny vaovao azo avy amin’ny Zandarimaria. Tsy misy indra fo Tohina mafy nanoloana an’izao tranga izao ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, jeneraly Ravalomanana Richard. “Tsy maintsy hatolotra ny Fitsarana io zandary nahavanon-doza io. Misy koa ny fepetra anatiny ato aminay izay hampiharina aminy satria tsy mila olona toy izany izahay ato amin’ny Zandarimaria”. Nampiany fa “efa nomena ny fitsaboana sahaza azy ireo telo naratra, ary tsy misy ahiana intsony ny ain’izy ireo ”. Manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly Soavinandriana ilay zandary mpiana-draharaha voatifitra voalohany. “Teo amin’ny sofiny havanana kosa no naratra tamin’ ilay sivily sendra nandalo ka voan’ ny piti-bala”, araka ny nampitain’ ny Zandarimaria. Nidina teny Ambohimangakely nankahery an’ireo zandary manohy ny asany ny jeneraly Ravalomanana Richard, omaly. L’article Adin’ny samy mpitandro filaminana :: Zandary nifampitifitra teny an-dalambe est apparu en premier sur AoRaha.
Fidinanana ifotony nataon’ny filoha : « Tsy ho tara amin’ny fampandrosoana ny faritra Sava… »
Nitohy tany Sambava indray ny fidinana ifotony naton’ny filoha Rajoelina Andry mivady, omaly. Nitokana fotodrafitrasa maromaro ny tenany sady nitondra fanampiana koa. “Tsy ho faritra tara intsony tahaka ny teo aloha i Sava sy i Sambava. Manao fanamby isika fa fotoana hampandrosoana ity distrika ity izao. Tsy maintsy hotanterahina ireo fotodrafitrasa efa nampanantenaina ho an’ny faritra”, hoy izy tany an-toerana. Notokanana tamin’izany ny Hotel des Finances ao Besopaka. Fotodrafitrasa manafaingana ny raharaham-panjakana. Eo ny fanomezana fisotroan-dronono, karaman’ny mpiasam-panjakana, ny hetra sy fadin-tseranana.Nampiasa ny CVO + “gelule”Nankahery sy nanome ny tamby fandrisika ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny Hopitalibe koa ny filoha mivady. Nanolotra fiara tsy mataho-dalana ho an’ny hopitaly, ahitana ireo fitaovana manara-penitra ahafahana haingana mamonjy aina ny tenany. Natolotra koa ireo “extracteur d’oxygène” miisa 50 handraisana ireo marary manana fahasarotana. Voalohany nisitraka ny « gelule CVO + » koa ny any Sambava. “Ho mora atelina sy ampiasaina kokoa ny CVO + mitaha amin’ny tambavy CVO ka antony namoronana azy io”, hoy ny filoha. Nijery ny fanamboarana ny lalana “pavet” sy “beton” eo an-tampon-tanàna sy ny manodidina koa ny tenany.Vatsy tsinjo sy Rakibolana ary kamiaoNotoloran’ny filoha fiara tsy mataho-dalana miisa roa koa ny faritra Sava ka ho an’ny distrikan’Andapa sy i Sambava izany. Manampy ireo ny “ca­mion benne” sy “benne” miisa dimy ho an’ny kaominina Sam­bava. Nifarana tamin’ny fanolorana Vatsy tsinjo avy aminy sy ny fanolorana milina fanjairana ary ny fizarana Rakibolana ho an’ny kilasy T5 sy T9 ny fitsidiham-paritry ny filoha mivady tao Sambava.Synèse R.L’article Fidinanana ifotony nataon’ny filoha : « Tsy ho tara amin’ny fampandrosoana ny faritra Sava… » a été récupéré chez Newsmada.
Fotoana fohy taorian’ny niaingany tao amin’ny seranam-piaramanidina Antsirabe, nidoboka tamin’ny tranon’olona iray, ao Tsarafiraisana, Ambano Antsirabe II, omaly antoandro, ny fiaramanidina kely iray. Naratra mafy tamin’izany ilay mpanamory sy mpianatra ho mpanamory tao anatiny.Nitrangana lozam-piaramanidina tao Antanivao Tombon­tsoa, fokontany Tsarafiraisana, kaominina ambanivohitr’Ambano, distrikan’Antsirabe II, omaly tamin’ny 12 ora sy 10 mn. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny talem-paritry ny Polisim-pirenena ao Vakinankaratra, fiaramanidina kely iray mitondra ny laharana 5RMKX no nianjera teo an-tokotanin’olona eo amin’io toerana io raha nikasa hihazo ny seranam-piaramanidina Antananarivo Ivato. Niainga tao amin’ny seranam-piaramanidin’ Antsirabe ity fiaramanidina ity tamin’ny 11 ora sy 40 mn ka vehivavy mpianatra ho mpanamory sy ny mpanamory sady mpampianatra ny niaraka aminy. Ireto olona roa ireto irery no tao anatin’ity fiaramanidina ity, araka ny tatitra voaray avy any an-toerana. Vao niainga kelikely anefa ilay fiaramanidina ka tamin’ny 12 ora sy 5 mn, fantatra fa nisy olana teknika tao amin’ny moterany ka nitarika ny fianjerany tao amina tokotanin’olona iray. Vokany, potipotika tsy nisy noraisina ilay fiaramanidina kely, nilatsaka mihitsy ny moterany. Naratra mafy ilay vehivavy mpianatra ho mpanamory sy ilay mpanamory niaraka aminy.Nalefa any amin’ny hopitaly Loterana…Fotoana fohy taorian’ny nitrangan’ny loza, tonga teny an-toerana nanao fizahana ny zava-nisy ny talen’ny fibaikoana ny Filaminam-bahoaka faritra Vakinankaratra sy ny lehiben’ny kaomisaria foibe Antsirabe, niaraka amin’ireo polisy miasa ao an-toerana. Nalefa any amin’ny hopitaly Loterana Andranomadio ireto olona roa naratra ireto, saingy tsy misy atahorana kosa ny ainy, araka ny tatitra nampitain’ny polisy. Naratra mafy teo amin’ny lohany izy ireo ary efa mahatsiaro tena. Nieren-doza ihany koa ireo olona tao amin’ny toerana nianjeran’ilay fiaramanidina. Ny elatra havian’ilay fiaramanidina no nahakasika ny trano ka nitarika ny fahasimbana. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana rehetra momba ity fianjerana fiaramanidina ity. Ahina ho tsy fahampian’ny tosika teo amin’ny motera teny am-piaingana no nitarika ny loza, saingy ny valin’ny fanadihadiana rehetra ny hamaritra ny marina rehetra momba ity raharaha ity.Jean ClaudeL’article Fiaramanidina kely nidoboka tao Ambano Antsirabe II: naratra mafy ilay mpanamory sy mpianatra vehivavy iray a été récupéré chez Newsmada.
Niteraka korontana ny fanesorana an’ireo mpivarotra amoron-dalana, teny amin’ny kaominina Ambohimangakely, afak’ omaly. Voatery niditra an-tsehatra nanampy ny Polisy kaominaly ireo Polisim-pirenena misahana ny distrikan’Avaradrano. Nipoaka ny baomba mandatsa-dranomaso tamin’ny fandravana an’ireo andiana mpivarotra nanakana ny lalam-pirenena faharoa tamin’ny alalan’ny fandorana kodiarana. Nahitana marimaritra iraisana ihany anefa ity toe-javatra ity, taorian’izay ary soa fa tsy dia naninona ny vehivavy iray nitondra vohoka izay torana noho ny baomba mandatsa-dranomaso. Nanomboka tamin’ny 7 ora maraina ny hetsika nanesorana an’ireo mpivarotra amorondalana teny Ambohimangakely, tamin’ny sabotsy. Nasain’ny mpitandro filaminana hiditra tao anatin’ny tsena nomen’ny kaominina ireo mpivarotra. Ny fandraofana ny entam-barotra no tena nampitroatra an’iretsy farany. Nilamina ny toe-draharaha rehefa nisy ny fihaonana teo amin’ny Ben’ny tanàna, Radafy Thierry sy ny solontenan’ireo mpivarotra, tamin’ny sabotsy hariva. Mitazona ny fepetra tsy fahafahana mivarotra amoron-dalana ny kaominina satria tsy mihemotra amin’ny ezaka fanadiovana sy fampandrosoana ary fampanarahan-dalàna ny tanàna ry zareo mpitantana. Nanaiky ny hiditra ao anatin’ny tsena vaovao ihany ireo mpivarotra, saingy tsy hampadoa haban-tsena azy ireo hatramin’ny faran’ny volana oktobra ny kaominina mba hitsinjovana an’ireo fianakaviana amin’izao fidiran’ny mpianatra izao. L’article Savorovoro teny Ambohimangakely :: Nanapoahana baomba ny fanaparitahana mpivarotra amoron-dalana est apparu en premier sur AoRaha.
Karate-Analamanga: efa saika misokatra avokoa ny Dojo fikotranana eto amin’ny ligin’Analamanga, ho an’ny taranja Karate. Efa fantatra tsara amin’ny fanajana sy fanarahana fitsipika ny mpiangaly ity taranja ity, raha ny nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga, Rakotomalala Jean Paul, ka tsy ilaina fanentanana amin’ny fanajana ny fepetra. Isan’izany ny famerana ny isan’ny mpikotrana, tsy tokony hihoatra ny 100, ny fanasana tanàna ary ny fanajana ny elanelana. Judo-Analamanga: Miandry ny “coup d’envoi” avy amin’ny Ministera, ny fanatanterahana ny fifidianana eo anivon’ny Ligin’Analamanga Judo, raha ny nambaran’ny filoha amperin’asa, Raoelison Vola. Raha ny tokony ho izy, amin’ny volana oktobra ho avy io, ny tokony hanaovana ity fifidianana ity. Mahakasika ny famerenana ny fanazaran-tena kosa, tsy mbola isan’ireo taranja mamerina ny kotrana ny Judo. Nambaran’ny mpanazatra fa tsy maintsy miandry torolalana avy amin’ny filohan’ny FMJ, izany. Nangonon’i Mi.Raz L’article Sombintsombim-baovao a été récupéré chez Newsmada.
Fotodrafitrasa eny ifotony: nijery ny fanamboaran-dalana RN5A ny minisitra Hajo
Miroso sy mandeha ny asa fanamboaran-dalana Ambilobe- Vohémar (RN5A). Anisan’nyfampanantenana nataon’ny filoha Rajoelina Andry ny fanarenana tanteraka iny lalam-pirenena mampitohy ny distrika roa iny.Nidina ifotony tao Vohémar nijery ny fandroson’ny asa fanarenana sy ny fanamboarana izany ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Andrianainarivelo Hajo, ny herinandro teo. Nambarany fa mizotra araka ny tokony ho izy amin’ny ankapobeny ny asa amin’izao fotoana izao. Efa saika tafapetraka avokoa ireo toerana hiasan’ny orinasa manao ny fanamboarana. Efa miroso ny asa fanamarinana sy fanajariana ny lalana (terrassement) na avy any Vohémar na ny avy any Ambilobe.Natao hijerena ny olana…Efa an-dalana tahaka izany koa ny fandrafetana sy fametrahana ireo fotodrafitrasa fivarinan’ny rano (dalots) miisa 60 mahery. Manampy ireo ny fijeren’ny minisitra ireo toerana fakana ranontany sy ny vato ary ny toby hipetrahan’ny orinasa manatentaraka ny asa. “Natao indrindra hijerena ny fandrosoan’ny asa sy hifampidinihina amin’ny fitadiavana vahaolana ho an’ireo olana mety mitranga ny fidinana ifiotony tahaka izao. Jerena koa ny mety hampitarazoka na hampikatso ny asa, ary hanomezana toromarika amin’ny fandrindrana ny asa amin’ny ankapobeny”, hoy ny minisitra Andrianainarivelo Hajo.Tsiahivina fa anisan’ny miantoka ny fampandrosoana any amin’iny faritra avaratra iny ny fahavitan’io lalam-pirenena io. Tahaka izany koa ny efa hirosoana amin’ny fanamboarana ny lalana Ambilobe mihazo ny any Antsiranana.Synèse R.L’article Fotodrafitrasa eny ifotony: nijery ny fanamboaran-dalana RN5A ny minisitra Hajo a été récupéré chez Newsmada.
Fanadihadian’ny OIT: anisan’ny ratsy karama indrindra ny eto Madagasikara
Anisan’ny firenena ratsy karama indrindra aty Afrika i Madagasikara, araka ny fanadihadiana nataon’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa (OIT). Tsy misy fiovana izany hatramin’ny 2004, fampiharana ny Ariary, ka hatramin’izao. Ambany indrindra ny karama amina sehatra tsy miankina. Tamin’ny 2019, salanisa amin’ny ankapobeny, 168 000 Ar isam-bolana, sokajin’asa farany ambany M1-1A ; 340 000 Ar sokajy OP3 – M5. Samy ivelan’ny sehatry ny fambolena avokoa ireo.Any amin’ny fambolena, ivelan’ny rafitra ara-dalàna, ny maro anisa sy kely ambany indrindra, sahanin’ny isam-pianakaviana. Isan-taona, fiakaran’ny vokatra, ny andraisam-bola izay miankina amin’ny karazam-bokatra: vary, lavanila, legioma, sns. Misy tsy manana fidiram-bola afa-tsy 170 000 Ar isan-taona.Betsaka ny miasa tena ivelan’ny ara-dalànaNy karama no singa iray andrefesana ny fari-piainan’ny Malagasy sy ny toekarem-pirenena. Singa iray hidiran’ny mpampiasa vola avy any ivelany sy eto an-toerana. Hita fa any amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ny fampiasam-bola be indrindra, antapitrisany dolara na amina miliara dolara, toy ny ataon’ny orinasa Ambatovy sy ny QMM. Io karama ambany io ny mahabetsaka ny miasa tena ivelan’ny ara-dalàna. Ankoatra ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono, hita izany amin’ny fahamaroan’ny mpivarotra.Na izany aza, mahazo tohana avy amin’ny (OIT) ny sehatra maro eto Madagasikara: politika famoronana asa, fanohanana ny sehatra tsy miankina ho fampandrosoana ny toekarena eto an-toerana, fananganana orinasa madinika, ady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Mbola tsy takona afenina anefa ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny asa, toy ny tsy fiantohana ara-pahasalamana, tsy fisoratana any amin’ny Cnaps. R.MathieuL’article Fanadihadian’ny OIT: anisan’ny ratsy karama indrindra ny eto Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.